Umatshini wokuPrinta i-China we-China kunye noMthengisi | Mestech
Ukufa i-Casting kunye ne-Stamping
CNC machining Itekhnoloji esebenzisa isixhobo soMatshini sokuChwetheza ukuCwangciswa kokuBalwa kweeKhompyuter ukwenza isixhobo somsebenzi. Iindidi zezixhobo zomatshini ezisetyenziswa ekuqhubeni zibandakanya i-CNC lathe, i-CNC yokugaya umatshini, i-CNC ekruqulayo kunye nomatshini wokugaya, njl.
I-MESTECH ixhotywe ngenani lezixhobo zokusebenza ze-CNC ezikwimigangatho ephezulu, kunye neqela elifanelekileyo lokuyila kunye neenjineli zemishini kunye nenkqubo engqongqo. Sizukile ukunika abathengi bethu iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ukuhanjiswa kwangexesha kunye neenkonzo.
Oomatshini kunye nezixhobo zeshishini ngumama kushishino lwale mihla. Icandelo elenza oomatshini bokuvelisa kunye nezixhobo lishishini lokulungisa ngomatshini. Inqanaba lobuchwephesha lokuqhubekeka ngomatshini limisela inqanaba lomgangatho woomatshini kunye nezixhobo.
Yintoni machining ngqo?
Machining yinkqubo yokuvelisa yokususa izinto kwindawo yokusebenza ukufumana imilo kunye nobungakanani obufunekayo. Oomatshini abasetyenziselwa ukwenziwa koomatshini babizwa ngokuba zizixhobo zomatshini. Izinto zokwenza izinto ngomatshini zibandakanya isinyithi, isinyithi esingenantsimbi kunye nezinye iimilo kunye nesinyithi esomeleleyo, kunye neeplastiki kunye neemveliso zeenkuni. Machining unako ukufikelela iindawo ngqo phezulu, ngoko ke ukubiza machining ngqo. Yeyona ndlela iphambili yokwenza imveliso yamalungu oomatshini ahlukeneyo.
Ngophuhliso lobuchwephesha bekhompyuter, itekhnoloji yolawulo lwedijithali yedijithali yaziswa kwizixhobo zomatshini, eziqonda ukwenziwa kwedijithali kunye nokuzenzekelayo kokusebenza kwesixhobo somatshini kwaye kuyiphucula kakhulu imveliso kunye nokusebenza ngokuchanekileyo. Olu hlobo lwetekhnoloji olusebenzisa inkqubo yekhompyuter ekusebenzeni isixhobo somatshini sibizwa ngokuba yiteknoloji yolawulo lwamanani. Isixhobo somatshini esisebenzisa inkqubo yokusebenza kwekhompyuter sisixhobo sokulawula umatshini (umatshini we-CNC).
CNC machining (ngqo machining) yinkqubo yokwenza. Izixhobo zoomatshini ziqhutywa phantsi kolawulo lweenkqubo zekhompyuter. Iinkqubo zekhompyuter zinekhowudi yokuhambisa abasiki ukuba bavelise iindawo ezenziwe ngomatshini ezihambelana nobungakanani benkqubo yekhowudi (ebizwa ngokuba yikhowudi yeG).
Ukuchaneka kwe-CNC yinkqubo yokuvelisa apho isoftware yekhompyuter ecwangcisiweyo ibonisa ukuhamba kwezixhobo zezityalo noomatshini. Le nkqubo ingasetyenziswa ukulawula uthotho koomatshini ezintsonkothileyo, ukusuka grinders kunye lathes koomatshini wokugaya kunye imizila. Ngokusebenzisa i-NC machining, imisebenzi yokusika emacaleni amathathu inokugqitywa kwiseti yokunyusa.
Ngokwesiqhelo, isoftware ye-CAM (yokuNcediswa kweMveliso yeKhompyuter) isetyenziswa kwivenkile yomatshini yokufunda ngokuzenzekelayo iifayile ze-CAD (Uyilo oluNcedisiweyo lweKhompyuter) kunye nokuvelisa inkqubo yeKhowudi yokulawula izixhobo zomatshini we-CNC.
Yintoni Isixhobo somatshini we-CNC?
Isixhobo somatshini we-CNC sisixhobo somatshini esidibanisa isixhobo somatshini ngokubanzi kunye nenkqubo yekhompyuter.
Izixhobo zoomatshini ezilawulwayo zibandakanya izinto zokusila, oomatshini bokugaya, ii-lathes, ii-drill kunye nezicwangciso.
Kwinkqubo ye-CNC lathe processing, ukumiselwa kwendlela yokusebenza ye-CNC ngokubanzi kulandela le migaqo ilandelayo:
(1) Ukuchaneka kunye noburhabaxa bomhlaba wokwenza umsebenzi oza kulungiswa kufuneka kuqinisekiswe.
(2) Yenza indlela yokulungisa imfutshane, ukunciphisa ixesha lokuhamba elingenanto kunye nokuphucula ukusebenza ngokukuko.
(3) Yenza lula umthwalo wokubala ngokwamanani kangangoko kunokwenzeka kwaye yenze lula inkqubo yokusebenza.
(4) Kwezinye iinkqubo ezinokuphinda zisebenze, ii-subroutines kufuneka zisetyenziswe.
Iindidi zezixhobo zomatshini we-CNC:
Oomatshini wokugaya 1.CNC
2.CNC iziko machining.
Ukukhutshwa kombane ngoomatshini be-CNC.
Umatshini wokusika wocingo we-5.CNC
Umatshini wokugaya ochanekileyo we-6.CNC
Ukukhutshwa kombane kumatshini we-CNC
Phawu CNC machining
Umatshini we-CNC woyisa ukupheliswa kokusebenza ngesandla kwezixhobo zoomatshini bendabuko. Inokusebenza okuphezulu, umgangatho ozinzileyo, ubungakanani obuchanekileyo kunye nokuzenzekelayo. Kufanelekile kakhulu ngokuchaneka okuphezulu kunye nemveliso esemgangathweni. Ukuchaneka i-CNC yindlela eyimfuneko yokufezekisa ukusebenza ngokukuko kwamalungu.
Ukusetyenziswa CNC machining
1. Nciphisa inani lezixhobo kunye nezixhobo, kwaye akufuneki izixhobo ezintsonkothileyo ukulungiselela izinto ezinemilo entsonkothileyo. Ukuba ufuna ukutshintsha imilo kunye nobungakanani bamalungu, kuya kufuneka uguqule iinkqubo zokwenza izinto, ezifanelekileyo ukuphuhliswa kunye nokuguqulwa kweemveliso ezintsha.
2. Umgangatho we-CNC wokusebenza uzinzile, ukuchaneka kokusebenza kuphezulu, ukuphindaphinda ngokuchanekileyo kuphezulu, kwaye kunokuhlangabezana neemfuno zokuqhutywa kweenqwelomoya.
3.Ukusebenza kwemveliso kuphezulu kwimeko yemveliso eyahlukeneyo kunye nebhetshi encinci, enokunciphisa ixesha lokulungiselela imveliso, uhlengahlengiso lwezixhobo zomatshini kunye nenkqubo yokuhlola, kunye nokunciphisa ixesha lokusika ngenxa yokusebenzisa elona nani lisikekayo .
4. Iiprofayili ezintsonkothileyo ezinomatshini ekunzima ukuzilungisa ngomatshini ngeendlela eziqhelekileyo, kwaye zinokuqhubekeka ezinye iindawo ezingenakubonwa. Isishwankathelo, luhlobo lwamalungu achanekileyo kunye nolwakhiwo oluntsonkothileyo kunye neebhetshi ezincinci zeemveliso, ezinjengee-asi ezichanekileyo, i-optical fiber shanks tail, izikhonkwane njalo njalo, ezifanelekileyo ngakumbi.
Inkampani yeMestech ibonelela abathengi ngeenkonzo zokuchaneka ngokuchanekileyo kweentlobo ngentsimbi, iinxalenye zeplastiki. Ukuba ufuna ulwazi ngakumbi, nceda unxibelelane nathi.
Egqithileyo Ukufa iindawo zokuphosa
Okulandelayo: Iindawo ngomshini
Cnc Machining Iziko
Cnc Machining zeplastiki lwaka
Iinkonzo Cnc Machining